‘Gareedhaan yaalii reebichaa narratti taasifame’ – Lij Yaareed – Ayyaantuu
HomeAfaan Oromoo‘Gareedhaan yaalii reebichaa narratti taasifame’ – Lij Yaareed
LIJ YAARED FB
(BBC Afaan Oromoo) — Hojiiwwan aartii kanneen akka fakkii kaasuuu, koomeediifi kanneen birootiin kan beekamu Lij Yaareed, Roobii darbe Caamsaa 05, 2021 magaala Finfinnee naannoo Alam Baank jedhamutti gareedhaan yaaliin reebichaa akka irratti taasifame BBCtti himeera.
“Dargaggoonni torba tahan jalqaba na waamanii maqaa arrabsoo sabummaa koo tuquun na arrabsan. Sana booda qofaatti si dubbisuu barbaanna jedhanii natti marsan. Achumaan lolaafi reebichatu jalqabe,” jechuun waan isa mudate ibsa Artist Lij Yaared.
Lolli kun gidduu galtummaa poolisiitiin adda bahuu kan dubbatu Lij Yaareed, miidhaan qaamaa cimaan irra gahe akka hin jirres himeera.
“Gareen kun garee durriyootaati. Poolisiiyyu ni tuffatu akka namaatti hin ilaalan. Yeroo sana poolisiiyyuu ofirraa darbachaa turan. Sana booda achii deeman. Namni isaan to’ates hin jiru,” jedha.
Waggaa tokko keessatti aggaammiin haleellaa amma isarra gahe kun kan yeroo lammaffaa ta’uus hima Lij Yaared.
“Ammaan duras gareen gurmaa’e bakka hojii kiyyaa dhufee mucaa ogeessa kaameeraa na waajjin hojjetu reebanii meeshaaleen ittiin hojjedhu kan akka kaameeraafi kanneen biroo na jalaa saamaniiru. Kan ammaa kun yeroo lammaffaaf,” jedha.
Sababni narratti xiyyeefatameera jedhuuf yoo ibsus, ” gareen waan Oromoo kana jibbu ni jira. Ani ammoo duraan afaan Amaaraan hojjechaa waanin tureef sirritti nabeeku. Amma ammoo hojiin kiyya waanuma Oromoo qofa. Sodaa hin qabu waa’ee saba kiyya nan barreessa. Nan dubbadhas,” jedha.
Lij Yaareed hojiilee aartii Oromoo fakkiidhaan kaasuun galii argatuun of jiraachisaa akka jirus hima.
Yaalii kaleessa irra gahe kana qaama poolisiitti beeksisus eenyummaan namoota kanaa waan hin beekamneef qaamni to’atame akka hin jirres himeera.
Magaala Finfinnee keessatti Waxabajjii darbe kan ajjeefame Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa dabalatee artistoota Oromoo biroo kanneen akka Caalaa Bultumee, Ittiiqaa Tafarii, Jaagamaa Taaddalaafi kanneen biroo irrattis reebichiifi haleellaan irra gahuunsaa ni yaadatama.
ONN: Gaaddisa Dhugaa - Haasaa Jila ABO fi Muummee Ministeeraa Itoophiyaa jidduutti taasifame
ONN: Gaaddisa Dhugaa - Haasaa Jila ABO fi Muummee Ministeeraa Itoophiyaa jidduutti taasifame Adoolessa 12,…
RSWO - Jaal Bilisummaa Guutaa, Dubbi-himaa WBO Z/Lixaa Waliin Marii Taasifame.
Sadaasa 19, 2019 https://youtu.be/3Gibppj1O54
RSWO: Marii J/Abdii Biyyaa – A/WBO K/Kaaba-Lixa Shaggar waliin dhimma yeroo irratti taasifame
RSWO : Eebla 26, 2020: https://youtu.be/FXQOkQiHG0s
I would like to support this gifted,young Oromo artist by purchasing some of his art work, or commissioning him to create new work. Could you pass my email address to him please? Thank you!